ကိုဗစ်၁၉-ဗြိတိန်က ဆေးဆိုင်နဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာ အလ...
27 มี.ค. 2563 - 16:41 น.
“နားကို မနားရတာ နှစ်ပတ် သုံးပတ်ရှိနေပြီ။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစား ကြိုးစား ပစ္စည်းတွေ စုံအောင် တင်မထားနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။”
ဒီစကားကတော့ ယူကေက စားသောက်ကုန်ရောင်းတဲ့ ဈေးဆိုင်နဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြသူတွေဆီက ကြားရလေ့ရှိတာ စကားဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါတောင်မှ လူအများ မစုဝေးပဲ ခပ်ခွာခွာနေကြဖို့ ဆိုတဲ့ အစိုးရက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ဖို့ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတာကို ယူကေနိုင်ငံသား တော်တော်များများက လိုက်နာနေရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပြီး မဖြစ်မနေ ထွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကျမှ အပြင်ထွက်လို့ ရတာပါ။
အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ လူအနည်းစုကလည်း အလုပ်ထိ မသွားပဲ အိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်က လူတိုင်းမှာ မရှိပါဘူး။
အမေရိကန်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဗဟိုချက်ဖြစ်လာနိုင်လို့ WHO သတိပေး
စပိန်မှာ သေသူ တရုတ်ထက်များ၊ ပိတ်ထားတဲ့ အိန္ဒိယက လူတန်းရှည်
ဥရောပနဲ့အာရှတလွှားက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်
ဘာလို့ ပစ္စည်းပြတ်သွားရတာလဲလို့ အအော်ခံရ
ကုန်စုံဆိုင်တခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် တစ်ဖ် အနေနဲ့ ရောဂါပိုး ကူးနိုင်ခြေရှိတဲ့ကြားက အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။
“အမှန်ကတော့ ကုန်စုံဆိုင်တွေလည်း ပိတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအနေအထားအရတော့ ပိတ်လို့မရသေးဘူး” လို့ တစ်ဖ်က ဘီဘီစီ ရေဒီယို အမှတ် (၁) ကို ပြောပါတယ်။
အခုလိုအချိန်က လူတွေ အစိုးရိမ်လွန်လို့ ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာ ပြုံတိုးပြီး လက်ဆေးဆပ်ပြာနဲ့ ပိုးသန့်ဆေးရည် အပါအဝင် ရသမျှ များများဝယ်ထားဖို့ စိတ်စောနေကြတာကို ကမ္ဘာတလွှား တွေ့မြင်နေရတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖ်က ကုန်စုံဆိုင်မှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှကုန်ရောင်းတဲ့အပိုင်းမှာ လုပ်ရသူဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီ လက်ဆေးဆပ်ပြာနဲ့ ပိုးသန့်ဆေးရည်တွေကို ရောင်းပေးရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီပစ္စည်းတွေကို လူတွေ အစိုးရိမ်လွန်ပြီး အများကြီးဝယ်ကြတာ တော်တော်ဆိုးဝါးလို့ မနိုင်မနင်းဖြစ်ကုန်တယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“ဒါတွေ ရောင်းကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဘာလို့ ပစ္စည်းပြတ်သွားရတာလဲ ဆိုပြီး ကျွန်မကို အော်ကြတယ်” လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
တချို့ပစ္စည်းတွေက တယောက် ဘယ်နှခုဆိုပြီး ကန့်သတ်ထားတယ်ဆိုတော့ များများဝယ်လေ့ရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ဈေးဝယ်သူတွေကို ရှင်းပြရတာ စိတ်မကောင်း
ဆေးဝါး လိုအပ်ချက်အတွက် လုပ်ကြရ
Covid-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုတွေ နိုင်ငံတကာမှာ တိုးလာတဲ့ အခြေအနေမှာ အများအတွက် မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ရသူ တော်တော်များများက အလုပ် မလုပ်ချင်ကြတော့ဘူးဆိုတာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ မာဖုဇ် ဒါဆု ပတဲ ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတော့ မပါပါဘူး။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် မာဖုဇ် ဟာ အင်္ဂလန်အနောက်မြောက်ပိုင်းက စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ ၂၅၀ ကို ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးပေးပြီး လူနာ ၂၀,ဝ၀ဝ လောက် ကိုလည်း ဆေးဝါးတွေ အိမ်အရောက် ပို့တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အများပိုင် ဆေးဆိုင် အစုအဖွဲ့တခုကို ကူညီ လည်ပတ်ပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဆေးဆိုင် အစုအဖွဲ့ကို မှီခိုနေရတဲ့ လူနာတွေကြောင့် သူဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတာပါ။
သူအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် အားကိုးရမယ့်သူ မရှိသူတွေ လိုအပ်တဲ့ ဆေးမရဘဲ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
“ဒီလို အလုပ်မျိုးက ချက်ချင်း မလုပ်ဘဲ နေလိုက်လို့ရတဲ့ အလုပ်မျိုး မဟုတ်သလို အိမ်ကနေ လုပ်လို့ရတဲ့ အလုပ်မျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လောလောဆယ် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဆေးပို့ပေးစရာ ရှိတာကို ဆက်ပြီး ပို့ပေးနေရဦးမှာပါ” လို့ မာဖုဇ်က ဆိုပါတယ်။
ကုန်စုံဆိုင်မှာ အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ဝယ်နေကြတာမျိုးတွေ ကြုံနေရပေမယ့် တစ်ဖ် ကလည်း ဒီလိုဆက်လုပ်နေဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို မာဖုဇ်နဲ့ သဘောတူပြီး အခုလို အရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာ လူအများအတွက် မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ရသူတွေက အလုပ်ဆက်လုပ်နေဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အများပြည်သူအနေနဲ့ အစားအသောက်နဲ့ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ဝယ်ပြီး စုထားဖို့ လိုနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ကလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရမှာပေါ့။ ကျွန်မတို့ပါ အလုပ်မလုပ်ကြဘူးဆိုရင် လူတွေ ပိုဒေါသထွက်ပြီး ပိုပြီး အစိုးရိမ်လွန်ကုန် ကြမှာပေါ့။”
လို့လည်း တစ်ဖ်က ပြောပါတယ်။
တစ်ဖ် အနေနဲ့ ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မသေချာ မရေရာ ဖြစ်နေသေးတဲ့ အခြေအနေတွေရယ်၊ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ကြောက်ရွံ့ ပူပန်ရတယ်လို့ ဝန်ခံပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်က သူ ချောင်းဆိုးဝေဒနာကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားခဲ့ရဖူးတော့ အဆုတ်ကို ထိခိုက်ထားတာ ဆိုပြီး စိုးရိမ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ အခံရှိသူတွေက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရတတ်တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေလည်း ရှိထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မ အဲဒါကိုပဲ အမြဲတွေးမိပြီး စိတ်ပူမိပါတယ်” လို့ တစ်ဖ်က ဆိုပါတယ်။
ဒီလို စိတ်ပူတာမျိုးက တစ်ဖ်တယောက်တည်းမှာသာ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကုန်လှောင်ရုံတရုံနဲ့ ကုန်စုံဆိုင်တဆိုင်မှာ အလုပ် ၂ ခုလုပ်တဲ့ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ဂျိတ်ဘားနက်ကလည်း သူ အလုပ်ထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးလာပြီး အိမ်မှာ တအိမ်လုံးကူးသွားမှာကို စိုးရိမ်နေပါတယ်။
“ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ပူတာထက် ကျွန်မ အဖွား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မ တူလေးကို ကျွန်မကတဆင့် ဒီရောဂါပိုးကူးသွားမှာကို စိုးရိမ်တာပါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဂျိတ်ဟာ အလုပ်ထဲမှာ လက်အိတ်ဝတ်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အပြင် ရောဂါပိုး မကူးအောင်လည်း အတော် ဂရုစိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ လူတော်တော်များများ အလုပ်ဆက်ရနေဖို့ မလွယ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြားကပဲ အလုပ်လုပ်လို့ ရနေသေး တာကို ကျေးဇူးတင်နေရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“လောလောဆယ်မှာ အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပြီး အလုပ်လုပ်ပြီး ငွေရှာလို့ မရတော့တဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ လူတွေမှာ ပိုက်ဆံမရှိ၊ အလုပ်မရှိဘဲ ဘယ်လိုမျိုး ရပ်တည်ကြပါ့မလဲ” လို့လည်း သူက စာနာစကားဆိုပါတယ်။
တပြည်လုံးက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်နေရချိန်မှာ တစ်ဖ်နဲ့ မာဖုဇ်လိုပဲ ဂျိတ်ကလည်း တတပ်တအား ပါဝင် လုပ်ဆောင်စရာ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို သူက အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ အခုလို တထောင့်တနေရာက ပါဝင်ရတဲ့ကိစ္စက နောက်တိုးဖိအားတွေ တွဲပါလာတာကိုလည်း ခံစားမိတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဆေးဆိုင်တွေကတော့ မဖြစ်မနေ ဖွင့်ဖို့လိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။
သူ အိမ်အရောက်ပို့ပေးရမယ့် ပစ္စည်းတွေကို ကုန်လှောင်ရုံမှာ ထုပ်ပိုးပေးရတဲ့အခါကျရင် ဝယ်ချင်တဲ့သူက မှာတဲ့ ပစ္စည်းမှန်သမျှ အကုန်မရတာမျိုးက ဝယ်သူအခက်တွေ့စေနိုင်တာကိုလည်း သတိထားမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဒါမျိုးဆို ဝယ်သူ့အတွက် ဈေးဝယ်လို့ မကောင်းတော့ပါဘူး။ လူကိုယ်တိုင် အပြင်ထွက်ဝယ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဈေးဝယ်သူလည်း ဖြစ်နေနိုင်တယ်လေ။ အဲဒါမျိုးတွေ စဉ်းစားမိပြီး တာဝန်တွေ ပိုပိလာသလို ခံစားရပါတယ်” လို့ ဂျိတ်က ဆိုပါတယ်။
“ကုန်စုံဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ အခုအချိန်မှာ တချို့ပစ္စည်းတွေက တယောက် ဘယ်နှခုဆိုပြီး ကန့်သတ်ထားတယ်ဆိုတော့ များများဝယ်လေ့ရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ဈေးဝယ်သူတွေကို ရှင်းပြရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူတို့အခြေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ဝယ်ထားဖို့လိုသလဲဆိုတာ ကိုယ်ကမ သိနိုင်ဘူးလေ” လို့ ဂျိတ်က ဆက်ပြောပါတယ်။
မာဖုဇ်ကလည်း လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အကျပ်အတည်းက သူကြုံဖူးသမျှ အခက်အခဲဆုံး အချိန်အခါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
အားကိုးရမယ့်သူ မရှိသူတွေအတွက် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ အလုပ်ထဲက လူတိုင်းက နားလည်ကြပြီး ဆေးမှန်မှန် လာမပို့တော့မှာ စိုးရိမ်လို့ ဖုန်းဆက်သူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“သူတို့ ဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာလည်း တနိုင်ငံလုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့လို အလုပ်သမားတွေက ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောကြတော့ ကျွန်တော် အပါအဝင် တခြားသူတွေအတွက်လည်း ဆက်ပြီး အားမွေး အလုပ်လုပ်ရပါတယ်”လို့ မာဖုဇ်က ဆိုပါတယ်။
ဂျိတ်နဲ့ တစ်ဖ်တို့အတွက်လည်း ခြေကုန်လက်ပန်းကျရတဲ့ အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေး အကျပ်အတည်းကာလ မြန်မြန်ပြီးသွားစေချင်ပြီလို့ ဆိုကြပါတယ်။
“ညဘက် အလုပ်ဆင်းရတာတွေ များသလို တခါတလေမှာ တဆိုင်းကို ၁၆ နာရီ ကြာလုပ်ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ၂၄ နာရီလုံး လုပ်နေရသလိုကို ခံစားမိပါတယ်။ မကြာခင် အခြေအနေတွေ တည်ငြိမ်သွားရင် ကောင်းမှာပဲ။ တချို့ရက်တွေဆို တော်တော်ကို ပင်ပန်းတယ်လေ”လို့ ဂျိတ်က ပြောပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ ဒီလိုဆက်တော့ လုပ်နေရဦးမှာပါပဲ။ ဒီလို လုပ်နေရတာ နှစ်ပတ် သုံးပတ်ပဲ ကြာမယ် ထားဦးတော့၊ ကျွန်မတို့ နားချိန်ရဖို့လည်း လိုတယ်” လို့ တစ်ဖ်က ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုဗစ်၁၉-ဗြိတိန်က ဆေးဆိုင်နဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာ အလုပ်လုပ်သူတွေရဲ့အခက်အခဲ